လူကုန်ကူးခြင်းဆိုသည်မှာ လူအများအား လှည့်စားခြင်း၊ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့၏ နေအိမ် သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်မှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရပြီး ထို့နောက်တွင် နိမ့်ကျသော အခကြေးငွေပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခကြေးငွေ လုံးဝမပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ခေါင်းပုံဖြတ်သော သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အတင်းအကျပ်အလုပ်ခိုင်းစေသည့် အလေ့အထဖြစ်သည်။ ထိုအလေ့အထသည် လူအများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု အဖြစ်သဘောထားပြီး ၎င်းတွင် ကျွန်စနစ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ များစွာရှိသည့်အပြင် တိုင်းပြည်အများစုတွင် ၎င်းသည် တရားဝင်မှုမရှိပါ။ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များသည် အခြေအနေမျိုးစုံတွင် အသုံးချခံရပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ၊ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်း (စာချုပ်ဖြင့် ချည်နှောင်ခြင်းခံရသည့် အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အကြွေးတင်နေသောကျေးကျွန်) နှင့် အတင်းအဓမ္မလုပ်သော ကျွန်ဘဝ အခြားပုံစံများတို့ ပါဝင်သည်။ မွေးစားခြင်းနှင့် အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မွေးကင်းစအရွယ်များနှင့် ကလေးများကို ရောင်းစားခြင်းသည် ထိုကလေးများကို လူကုန်ကူးခြင်းဟုလည်း စဉ်းစားကြသည်။ လူသားများကို ကုန်ကူးခြင်း အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများကို ကုန်ကူးခြင်းအား တားဆီးရန်၊ နှိမ်နင်းရန်နှင့် အပြစ်ပေးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကျင့်ဝတ် (ပါလာမို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကျင့်ဝတ် ဟူ၍လည်း ရည်ညွှန်းသည်) သည် နိုင်ငံတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရုံးချုပ်အတည်တကျစိုက်မထားသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှ စီစဉ်သည့် ပြစ်မှုများကိုဆန့်ကျင်သောညီလာခံဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂမှချမှတ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကျင့်ဝတ် ဖြင့်လူကုန်ကူးခြင်းအား "ခေါင်းပုံဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် အင်အားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ လှည့်စား ခြင်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အင်အားချည့်နဲ့သည့် အခြားပုံစံများ သို့မဟုတ် အခြားလူတစ်ဦး ပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုရှိသော လူတစ်ဦး၏ သဘောတူညီချက်ကိုရရှိရန် ငွေပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးခံစား ခွင့်များကိုပေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရယူခြင်း စသည့်နည်းလမ်းတို့ဖြင့် လူသစ်စုဆောင်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ ့ခြင်း၊ ပုန်းအောင်းခွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လူများကို လက်ခံထားခြင်း" ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
2008 စက်တင်ဘာလအထိ၊ ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ကျင့်ဝတ်အား နိုင်ငံပေါင်း 117 နိုင်ငံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဖွဲ့ဝင် 124 ဖွဲ့ ရှိသည်။ လူကုန်ကူးခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသော ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ် လူသားများအား လူကုန်ကူးရာမှငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံ နှင့်9ဘီလီယံအတွင်း ရရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း ကြသည်။ဥရောပကောင်စီ သည်"လူကုန်ကူးခြင်းသည် ကမ္ဘာအနှံ့ နှစ်စဉ်ဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 42.5 ဘီလီယံဖြင့် ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပြန့်ပွားလွယ်သောပမာဏသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်" ဟုဖော်ပြ သည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် နိုင်ငံပေါင်း 127 နိုင်ငံမှ လူဦးရေ 2.5 သန်းနီးပါး လူကုန်ကူးခံရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ခန့်မှန်းသည်။ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များသည် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ လှည့်ဖြားခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံးလုံးလျားလျား အဓမ္မခေါ်ဆောင် ခြင်း စသည်ဖြင့် လူသူစုဆောင်းခြင်းခံရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များကကျော်ဖြတ်၍ လူကုန်ကူးခြင်းအား ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းအရ၊ သီးခြားဖွဲ့စည်းထား သော အစိုးရအချင်းချင်းပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) (ဥရောပအတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း) သည် မြောက် အမေရိက၊ ဥရောပ၊ ရုရှားနှင့် အရှေ ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ် အနေဖြင့် လူကုန်ကူးခြင်း ပြဿနာကို တိုက်ဖျက်မည့် ဦးဆောင်အေဂျင်စီများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူကုန်ကူးခြင်းသည် အကျိုးအမြတ်များသောလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော နယ်မြေဒေသများဖြစ်သည့် ရုရှ၊ ဥရောပအရှေ့ပိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်နှင့် ကိုလံဘီယာတို့တွင် လူကုန်ကူးခြင်းကို ကြီးမားသော ဒုစရိုက် အဖွဲ့အစည်းများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ လူကုန်ကူးခြင်း အများစုကို အုပ်စုအသေးစားများ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ကွန်ရက်များက လုပ်ဆောင်ကြပြီး အုပ်စုတစ်ခုစီသည် လူစုဆောင်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတို့ကဲ့သို့ ကဏ္ဍတစ်ခုစီတွင် အထူးပြုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းသည် နည်းပါးသော ကနဦး ငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်ပြီး တရားစွဲဆိုခြင်းမှာ အတော်အတန် ရှားပါးသောကြောင့် အလွန်အကျိုးအမြတ်များသည်။ ကုန်ကူးခြင်းခံရသည့်လူများသည် များသောအားဖြင့် ဒေသအတွင်းရှိ အားနည်းချက်အရှိဆုံးနှင့် အင်အားမရှိဆုံး လူနည်းစုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အခွင့်အလမ်းကန့်သတ်မှုရှိသော ဆင်းရဲချို ့တဲ့သည့် နေရာများမှ လာကြသူများဖြစ်ပြီး လူမျိုးစု လူနည်းစုများဖြစ်သည်။ ထိုလူတို့သည် မည်သည့်လူမှုရေးနောက်ခံ၊ အဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် မည်သည့်လူမျိုးတို့မှမဆို ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အိမ်ပြေးများ သို့မဟုတ် ဒုက္ခသည်များ ကဲ့သို့သော အိမ်ပစ်ရာပစ်ပြေးရသည့်လူများ ဖြစ်သည်။ ဒေသအတွင်းမှ အားနည်းချက်ရှိပြီး အင်အားမရှိသည့် လူနည်းစုမှ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များစွာ ရှိသော်လည်း သားကောင်များမှာ မည်သည့်နေရာဒေသမှမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ လူကုန်ကူးခြင်းအတွက် သီးသန့် သားကောင် အမျိုးအစားမရှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ လူအများသည် လူကုန်ကူးခြင်းခံရသူများမှာ ဆင်းရဲသော တိုင်းပြည်များမှဟူ၍ ထင်လေ့ရှိသော်လည်း အမှန်မှာ ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အလွန်ကြွယ်ဝ ချမ်းသာသောမိသားစုမှ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုပြစ်မှုမျိုးသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လူအများ ဂရုပြုမိခြင်းမရှိဘဲ ဤနည်းအတိုင်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ထိုအကြောင်းကိစ္စ၏ လေးနက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမှာ အနည်း ငယ်သာရှိသည်။
သေရေးရှင်ရေးတမျှ အကျဉ်းအကျပ် အခြေအနေများတွင် ရှိနေသော အမျိုးသမီးများသည် အထူးသဖြင့် လိင်လုပ်ငန်းအတွက် လူကုန်ကူးသူများ၏ ထူးထူးခြားခြား ပစ်မှတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း၊ အလုပ်ကောင်းရမည်ဆိုသောကတိများ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် စာသင်ကြားရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ကိုယ်ကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်ပြီး နောက်တွင် သားကောင်များကို ပြည့်တန်ဆာများဖြစ်စေရန် အတင်းအကျပ် ပြုလုပ်ကြသည်။ ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် အလုပ်နေရာထားခြင်းတို့ကို စီစဉ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပွဲစားများမှတဆင့် အမျိုးသမီးများသည် သူတို့၏ သွားမည့်နေရာများသို့ လိုက်ပို့ခြင်းခံရပြီး အလုပ်ရှင်များထံသို့ ပေးပို့ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့၏ သွားရမည့်နေရာများသို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် အချို ့အမျိုးသမီးများသည် သူတို့လုပ်ရမည့် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သူတို့သည် လိမ်ညာခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းကို သိကြရသည်- အများစုသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်ခြင်းခံရပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် မတရားဖိနှိပ်ခြင်းခံရသည့် အနေအထားများတွင် ကျရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအခြေအနေများမှ ထွက်ပြေးခြင်းသည် ခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တရားစီရင်ရေးဋ္ဌာနမှ 2007 ဇန်နဝါရီလမှ 2008 စက်တင်ဘာလအထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူကုန်ကူးသည့်ဖြစ်ရပ် 1,229 ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့အနက် 83 ရာခိုင်နှုန်းမှာ လိင်မှုဆိုင်ရာကုန်ကူးခြင်း ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ်များကို ကုန်ကူးခြင်းတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မိဘများ၏ အလွန်အမင်းဆင်းရဲခြင်းအား ကိုယ်ကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ မိဘများသည် သူတို့၏အကြွေးများကို ပြန်ဆပ်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ငွေရရှိရန် ကလေးများကို လူကုန်ကူးသူများထံသို့ ရောင်းချကောင်းရောင်းချနိုင်မည် သို့မဟုတ် သူတို့၏ ကလေးများအတွက် ပို၍ကောင်းမွန်သောဘဝနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိဘများသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ခံရနိုင်သည်။ အာဖရိကအနောက်ပိုင်းတွင် ကုန်ကူးခံရသည့် ကလေးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အာဖရိက အေအိုင်ဒီအက်စ် ကပ်ဆိုးကြောင့် မိဘတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးကို ဆုံးရှုံးရသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမျိုး သား (တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးသမီး) ကလေးများသည် ကလေးစစ်သားအဖြစ်သို့ အတင်းအကျပ်သွတ်သွင်းခြင်း ခံရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးဋ္ဌာန၏ 07-08 လေ့လာချက်တွင်၊ ထိုနှစ်အတွက် လူကုန်ကူးသည့်အမှု စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် ကလေးများအား လိင်လုပ်ငန်း အတွင်း၌ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းကြောင်း ဖော်ပြသည်။
မွေးစားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းခံရပါက တစ်ခါတစ်ရံတွင် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတို့အကြားတွင် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များအား ကုန်ကူးခြင်းဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ David M. Smolin (ဒေးဗစ် အမ် အက်စ် မိုလင်) ၏အိန္ဒိယနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားရှိ ကလေးသူငယ် ကုန်ကူးခြင်းနှင့် မွေးစားခြင်း ဆိုင်ရာ မကောင်းသတင်းစာတမ်းများတွင် တိုင်းပြည်အချင်းချင်း၌ မွေးစားသည့် စံနစ်အတွင်းရှိ စံနစ်တကျ ဖြစ်သော အင်အားချည့်နဲ့မှုသည် မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာ မကောင်းသတင်းများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနို်င်စေရန် ပြုလုပ် ကြောင်း သူသည် ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် တောင်အမေရိကရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကလေးတို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိင်အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းသို့ နှစ်စဉ်ရောင်းချခြင်းခံရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း သို့မဟုတ် မိဘမဲ့ကလေးများဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့သည် သူတို့၏မိသားစုမှ အမှန်တကယ် ရောင်းချ ခြင်းကို ခံရသည်။ International Labor Organization (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့) ၏အဆိုအရ၊ ကမ္ဘာအနှ့ံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 31 ဘီလီယံ ဖြစ်ပေါ်စေသော အဓိကအားဖြင့် အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှု ပါဝင်ပတ်သက် သည့် ကျွမ်းကျင်ရန်မလိုအပ်သော အလုပ်များတွင် အမျိုးသားများသည် လူကုန်ကူးခြင်းခံရမည့် အန္တရာယ် ရှိကြောင်းသိရသည်။ လူကုန်ကူးခြင်း၏ အခြားသောပုံစံများတွင် အတင်းအကျပ်လက်ထပ်စေခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင် ခိုင်းဖတ်ဘဝတို့်ပါဝင်သည်။ University of Toronto Law School (တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေကျောင်း) မှ ကျန်းမာရေးဥပဒေနှင့် မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ Bernard Dickens (ဘားနပ် ဒစ်ကင်(စ်))က ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်- "နီပေါနှင့် ဘူတန်ကဲ့သို့သော ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများမှ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးများသည် အိန္ဒိယအမျိုးသားများအတွက် သတို့သမီးအဖြစ် မှောင်ခိုကူးခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းခံကြရသည်။"
လူကုန်ကူးခြင်း၏ တရားမဝင်ဖြစ်သော သဘာဝနှင့် ကွဲပြားခြားနားသော နည်းလမ်းများကြောင့် တိကျသော အတိုင်းအတာပမာဏကို မသိရှိရပေ။ United States State Department (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာန) ၏အချက်အလက်များအရ " နှစ်စဉ် ခန့်မှန်းခြေ 600,000 မှ 820,000 အထိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ [တို့သည်] အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်၍ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70 ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးကြီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြပြီး၊ 50 ရာခိုင်နှုန်းအထိမှာ ဥပဒေအရ အရွယ်မရောက်သေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံတစ်ရပ်ရပ်တွင် ရုံးချုပ်အတည်တကျမရှိသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၏ သားကောင်များ၏ အများစုသည် စီးပွားရေးဆန်သော လိင်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်ခြင်းဆီသို့ လူကုန်ကူးခြင်းခံရကြောင်း အချက်အလက်များက ဖော်ညွှန်းပြသသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ "အလုပ်ခေါင်းပုံဖြတ်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံများအတွင်းမှာပင် လူအများအား စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ကောင်းလောက်အောင် ကျွန်ပြုခြင်းသည် လူကုန်ကူးခြင်း ပုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အဝေးမှနေ၍ ခြေရာခံမိစေရန် ခက်ခဲကြောင်း" ကိုသူတို့သည် ပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘော်စနီးယားနှင့် ကိုဆိုဗို တို့တွင် UN (ကုလသမဂ္ဂ) ဝင်ရောက်ပြီးနောက်နှင့် နောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံတို့ တွင် NATO peacekeeping (နေတိုး ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေး) တပ်များ ဝင်ရောက်ပြီးနောက်တွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ တိုးမြင့်လာကြောင်းကို သတင်းထောက်များက မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ ကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်များသည် လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် အတင်းအကျပ် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေးတပ်များကို ထောက်ခံအားပေးသူများသည် လူအနည်းစု၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများသည် မစ်ရှင်တွင် ပါဝင်သူအများအပြားကို အပြစ်ကျူးလွန်သူ ဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုရန် မသင့်ကြောင်းကို အငြင်းအခုံပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေး မစ်ရှင်များနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသော ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အတင်းအကျပ်ခို်င်းစေသညု့် အမှုကိစ္စများကို အလေးအနက်ထား၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသည့်အတွက် NATO (နေတိုး)နှင့် UN (ကုလသမဂ္ဂ) အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းခံရသည်။ လူကုန်ကူးခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန်အတွက် မြှုပ်နှံထားသော ကနေဒီယန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထား သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Future Group (အနာဂတ် အုပ်စု)၏ 2006 အစီအရင်ခံစာတစ်ခုတွင် စက်မှုနိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ကနေဒါနိုင်ငံအား ၎င်း၏ "အလွန်ဆိုးရွားသော" သားကောင်များကို ဆက်ဆံပုံ မှတ်တမ်းအရ F အဆင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ "စံသတ်မှတ်ချက်အောက်ကျဆင်းခြင်း - လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆို်င်ရာ လေ့လာချက်တစ်ရပ်" ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော အစီရင်ခံစာတွင် ကနေဒါ နိုင်ငံသည် ဤပုံစံဖြစ်သော ကျွန်စံနစ်ကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် "နိုင်ငံတကာအလယ်၌ အရှက်ရဖွယ်ရာတစ်ရပ်" ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
တူညီသော မှားယွင်းသည့် အယူအဆတစ်ရပ်မှာ လူကုန်ကူးခြင်းသည် ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်သာ ဖြစ်ပွား သည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းသည် ထိုမြေအောက်၊ အကျိုးအမြတ် များသောစံနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိကြသည်။ “အရင်းအမြစ်နိုင်ငံ” တစ်ခုဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခုမှ လူအများ လူကုန်ကူးခြင်း ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်၊ ထိုတိုင်းပြည်များသည် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေကြပြီး စစ်ပွဲ၊ လာဘ်စားမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုများကြောင့် နောက်ထပ် အင်အားချည့်နဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြရနိုင်သည်။ အချို ့သော အရင်းအမြစ်နိုင်ငံများမှာ နီပေါ၊ ဂွာတီမာလာ၊ ယခင် ဆိုဗီယက်နယ်မြေ ဒေသများနှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ ဖြစ်သော်လည်း နောက်ထပ်နိုင်ငံများစွာ ကျန်ရှိသေးသည်။ မက္ကဆီကို သို့မဟုတ် အစ္စရေးကဲ့သို့သော “အကူးအပြောင်းနိုင်ငံ” တစ်ခုဆိုသည်မှာ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များသည် ၎င်းတို့ကျွန်ပြုခံရမည့် နိုင်ငံဆီသို့မရောက်မီ လမ်းခရီးတွင် ယာယီရပ်နားသည့် အနားအထောက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ “ခရီးလမ်းဆုံးနိုင်ငံ” တစ်ခုဆိုသည်မှာ ကုန်ကူးခံရသည့် လူများအဆုံးသတ်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းပြည်များရှိ နိုင်ငံသားများတွင် လူကုန်ကူးသူများ၏ "ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ"ကို "ဝယ်ယူရန်" သုံးစွဲနိုင်သော လုံလောက်သည့် ဝင်ငွေရှိကြသောကြောင့် ၎င်းတိုင်းပြည်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာကြသည်။ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဥရောပအနောက်ပိုင်းရှိ နေရာဒေသ အများအပြားနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် ခရီးလမ်းဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး) ၏အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များကို အများဆုံးပို့ခြင်းခံရသည့် ဘုံခရီး လမ်းဆုံးနိုင်ငံများမှာ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ အစ္စရေး၊ ဘယ်(လ်)ဂျီယန်၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ တူရဂီနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ဖြစ်ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် လူအများ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များတွင် ထိုင်း၊ တရုတ်၊ နိုင်ဂျီးယား၊ အယ်(လ်)ဘေး နီယား၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ဘဲလာရပ်(စ်)၊ မော်ဒိုဗာ နှင့် ယူကရိန်း တို့ပါဝင်သည်။ လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် ကလေးသူငယ် လိင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် မြှုပ်နှံထားသော ကနေဒီယန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Future Group (အနာဂတ် အုပ်စု)၏ 2006 အစီအရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် စက်မှုနိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ " စံသတ်မှတ်ချက် အောက်ကျဆင်းခြင်း - လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့် သားကောင်များအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည်ပြည်ဆို်င်ရာ လေ့လာချက်တစ်ရပ်" ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော အစီရင်ခံစာတွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် Fအဆင့် ရရှိခဲ့သည်၊ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသည် D အဆင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် B+ နှင့် ဩစတြေးလျ၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဂျာမနီနှင့် အီတလီနိုင်ငံအားလုံးတို့သည် အဆင့် B သို့မဟုတ် B- များရရှိကြသည်။
Trafficking of womenArchived 1 November 2010 at the Wayback Machine.
HumanTrafficking.org Archived 22 November 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လူကုန်ကူးခြင်း&oldid=725959" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။